XOG CUSUB: Maxaa ka jira in Jabhadda ONLF ay ka tanaasuleyso magaca Ogaadeeniya? (Maxaa isbaddelay?) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XOG CUSUB: Maxaa ka jira in Jabhadda ONLF ay ka tanaasuleyso magaca...
XOG CUSUB: Maxaa ka jira in Jabhadda ONLF ay ka tanaasuleyso magaca Ogaadeeniya? (Maxaa isbaddelay?)
Ethiopia (Halqaran.com) – Hoggaamiyaha jabhadda ONLF Admiral Maxamed Cusmaan, ayaa sheegay in magaca Ogaadeen ay ka tanaasulayaan haddii loo arko maslaxada Shacabka Soomaalida, isagoo tilmaamay in muhiimada ay tahay oo kaliya rabitaanka dadka.
Isagoo la hadlayay Odayaasha dhaqanka ayuu soo bandhigay halka ay mareyso halgankii ay ugu jireen sidii ay u xoreyn lahaayeen Ismaamulka Soomaalida oo ku hoos nool dowladda Federaalka ah ee Itoobiya.
“Haddaad Odayaashii dalka aad tihiin, soo dooda, soo kala rog roga magacaa isleedihiin ummada wuu mideeyaa oo dadkan iyo dalkan maslaxadiisa ah keena, isagaa subaxa danbe aan ku dhawaaqeynaa oon qaadaneynaa, qabiil reer Ogaadeenya la dhoho wax dana aynu ka leenahay majirto, Soomaali oo dhan ayaa ehelkeena ah, iyagaasaan u dagaalameynaa” ayuu yiri Admiral Maxamed Cusmaan.
“Ilaahay Hortii Magac Reer Weligay umaanu dagaalamin, oo naguma Jirto” Ayuu raaciyey hadalkiisa.
Jabhada ONLF ayaa hubka iska dhigtay, waxeyna heshiis la gaartay dowladda Itoobiya, iyadoo isbeddeladan sida dardarta leh ku dhacay uu yimid markii uu talada dalka Itoobiya la wareegay Abiye Axmed.
Hoggaamiyaha jabhadda ONLF Admiral Maxamed Cusmaan